Pwnagotchi, iyo tamagotchi yekubiridzira WiFi network | Linux Vakapindwa muropa
Ndichitsvaga mumambure ndakawona chidimbu chenhau chakabata pfungwa dzangu uye chandingada kugovana nevaverengi vedu. yekutanga yakagadzika vhezheni yePwnagotchi chirongwa chakaburitswa nguva pfupi yadarika, iyo inopetenuka se chishandiso chekubira isina waya netiweki.
Iyo purojekiti Pwnagotchi inosiyana nemamwe mapurojekiti ane chinangwa chimwe chete kubva pachikamu chekugadzirwa kwayo, kubvira Pwnagotchi yakagadzirirwa seyemagetsi chipfuyo chakafanana neakakurumbira Tamagotchi. Iyo huru prototype yechigadzirwa Iyo yakavakirwa paRaspberry Pi Zero W bhodhi, asi inogona zvakare kushandiswa mune mamwe maRaspberry Pi mabhodhi, pamwe nechero nzvimbo yeLinux ine isina waya adapter inotsigira kushanda mukutarisa nzira, manejimendi inoitwa kuburikidza neiyo LCD skrini kana webhu interface. Iyo kodhi yeprojekti yakanyorwa muPython uye inogoverwa pasi pechirevo cheGPLv3.
1 About Pwnagotchi
2 Ungawana sei iyo Pwnagotchi mufananidzo?
Pwnagotchi ine nzira chaiyo yekushandisa kubvira mushandisi anofanira kusangana nayo sezvavaizoita netamagotchi, sezvo chipfuwo inofanirwa kupihwa mapakeji iyo inotorwa kubva kune akasiyana akasiyana waya poindi munhaurirano nhanho yechisungo chitsva (iyo inozivikanwa ruoko.
Zvikasadaro, chishandiso ichi chinowana network dzisina waya dziripo uye dzinoedza kudzivisa kubata maoko. Sezvo ruoko rwunotumirwa chete kana mutengi achibatana kunetiweki, chishandiso chinoshandisa nzira dzakasiyana siyana kudzima kubatana kwazvino uye kumanikidza vashandisi kuti vadzokerezve kunetiweki.
Munguva yekubatira, dhatabhesi yemapakeji akaunganidzwa, kusanganisira hashes dzinogona kushandiswa kusarudza makiyi eWPA.
Iyo purojekiti inomiririra kushandiswa kwenzira dzekudzidzisa dzinoenderana neAAC (Actor Kubatsira Mutsoropodzi) uye LSTM yekumusoro-yakavakirwa neural network, iyo yakashandiswa kugadzira bots kutamba mitambo yemakomputa. Iyo yekudzidzira modhi inoitwa apo chishandiso chiri kushanda, uchifunga nezve zvakapfuura ruzivo kusarudza yakasarudzika nzira yekurwisa isina waya netiweki.
Kuburikidza nemuchina kudzidza, Pwnagotchi inosarudza zvine simba kutora matanho ye traffic uye sarudza kukwirira kwekumanikidzwa kumiswa kwemisangano yevashandisi. Chinyorwa mashandiro maitiro anotsigirwa, mune iyo kurwisa kunoitwa.
Iyo packcap iri nani inoshandiswa kudzora mhando dzetraffic dzinodiwa kusarudza makiyi eWPA. Kufungidzira kunoitwa zvese musingaiti maitiro uye nemhando dzinozivikanwa dzekurwiswa dzinomanikidza vatengi kuendesa PMKIDs kunetiweki.
Mapakeji akabatwa anofukidza mafomu ese ehe hashcat-anoenderana maoko akachengetwa muPCAP mafaera nefaira rimwe rakanyorwa kune yega yega netiweki network.
Nekufananidza nePwnagotchi, Inotsigira kutsunga kwemimwe michina iri padyo uye zvakare zvine mukana wekutora chikamu mukuvakwa kwemepu yekuvhara yakawanda. Kubatanidza Pwnagotchi zvishandiso kuburikidza neWiFi, iyo Dot11 protocol inoshandiswa. Pedyo nemidziyo kuchinjana kwakagashirwa dhata pane isina waya netiweki uye kuronga zvakabatana basa, kukamura migero yekurwisa.
Pwnagotchi mashandiro anogona kuwedzerwa kuburikidza nemapulagini, nenzira yemabasa senge otomatiki software yekuvandudza system, kugadzirwa kwemacopy makopi, akabatwa maoko ekubatisa mapaketi kumatanho eGPS, kuburitswa kwedata nezve dzakabiwa manetwork pane onlinehashcrack.com, wpa-sec.stanev.org, wigle .net uye PwnGRID, yekuwedzera mireza (ndangariro yekushandisa, tembiricha, nezvimwewo) uye kuitiswa kwesarudzo yeduramazwi kusarudzwa kwekubatwa ruoko.
Ungawana sei iyo Pwnagotchi mufananidzo?
Chekupedzisira, kune avo vane Raspberry Pi Zero, kunyangwe Raspberry 3 kana 4 unogona kuwana iyo system mufananidzo nekuenda kune inotevera chinongedzo.
Mufananidzo wacho unogona kunyorwa pane yako SD kadhi neEtcher, chinova chishandiso cheplatform. Kuti uzive zvimwe zvakawanda pamusoro pekugadziriswa uye maitiro ekuishandisa, unogona kuzviita mune iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Pwnagotchi, iyo tamagotchi yekubiridzira netiweki dzeWiFi